बि’यरले आ’यु ब’ढाउँछ, दूधले रो’ग ब’ढाउँछ धेरै बि’यर पिएमा…. – eSidhakura
मुख्य पृष्ठयौन/स्वास्थ्यबि’यरले आ’यु ब’ढाउँछ, दूधले रो’ग ब’ढाउँछ धेरै बि’यर पिएमा….
काठमाडौं । हाम्रो नेपाली समाजमा म’दिरा पि’उनु स्वास्थ्यको लागि हा’निकारक मानिन्छ । तर, दुध भने जन्मेदेखि नै एक–दुई गिलास खु’वाउने बानी पारिएको हुन्छ । म’दिरा से’वनले विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य स’मस्या पै’दा गर्ने र मानिसको अ’कालमा ज्या’न लिने गर्छ भन्ने ग’लत मा’न्यतामा ध्या’न राख्दै आईएको छ । परिवार तथा समाजले वि’यर होइन दुध मत्रै पि’उन पर्छ भन्ने आम मा’नसमा छा’प रा’खिदिएको पाइन्छ । तर, पिपुल फर एथिकल ट्रि’टमेन्ट अफ एनिमल (पेटा) ले दूध पिउनुभन्दा बि’यर पि’उँदा फा’इदा हुने बताएको छ ।
पेटाका अनुसार बि’यर पि’उँदा ह’ड्डी मात्र होइन आ’यु पनि बढ्छ । शारीरिक र मा’नसिक स्वास्थ्यको विका’सका लागि दूध फा’इदाजनक हुन्छ । त्यसैले मानिसहरु हरेक दिन दुई वा तीन गिलास दूध पिउने गर्छन् । त्यति मात्र होइन, पेटाले दूधका विभिन्न बे’फाइदाका बारेमा समेत उल्लेख गर्दै मो’टोपन, डा’यबेटिज र क्या’न्सर जस्ता रो’गका कारण पनि दूध नै भएको जनाएको छ । पेटाले यस्तो दा’बी हा’र्वर्ड स्कुल अफ प’ब्लिक ’हेल्थको एउटा रि’पोर्टको आधारमा गरेको हो । बि’यरलाई अ’ल्कोहल बे’भरेज मानिन्छ ।
यसमा प्रयोग हुने पो’षक त’त्वहरु गहुँ, मकै र धानले स्वास्थ्यलाई फा’इदा पुर्याउने पेटाले उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी, बि’यरमा हुने ९० प्रतिशत पानी बाहेक फा’इबर, क्या’ल्सियम र आ’इरनसमेतले शरीरलाई फा’इदा पुर्याउँछ । बि’यरले शरीरका ह’ड्डी ब’लियो ब’नाउँने काम गर्छ । मां’सपेशी विकासको लागि पनि बि’यर फा’इदाजनक मा’निन्छ । त्यसैले, पेटाले बि’यर दूधभन्दा फा’इदाजनक हुने बताएको छ । यद्यपि, बि’यरमा पनि म’दिराको मात्रा हुने हुँदा धेरै से’वन गर्दा स्वास्थ्यमा ग’म्भीर अ’सर पर्छ ।
१४६९५ पटक पढिएको